श्रीमतीलाई मायाको प्रमाण दिन औंला काटे, काटिएको औंला बट्टामा राखेर ससुराली गए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
श्रीमतीलाई मायाको प्रमाण दिन औंला काटे, काटिएको औंला बट्टामा राखेर ससुराली गए
काठमाडौं। श्रीमान श्रीमतीबीच झगडा भइरहन्छ । रिसाएमा एक अर्कालाई फकाउने आफ्नो माया देखाउने पनि गरिन्छ । तर, कसैले श्रीमतीलाई आफूले माया गर्छु भन्ने प्रमाणित गर्न आफ्नै औंला काट्लान् ? एक युवकले यस्तै गरेका छन् । ती युवाले आफूसँग रिसाएर माइती गएकी श्रीमतीलाई आफ्नो मायाको प्रमाण दिन आफ्नो औंला काटे। त्यसपछि काटिएको औंलालाई बट्टामा राखेर ससुराली पुगे ।
घटना भारतको छत्तीसगढको हो । ती युवाले काटिएको औंला लिएर ६० किलोमिटर साइकल चलाउँदै श्रीमतीलाई भेट्न ससुराली पुगे । बट्टामा काटिएको औंला देखेपछि श्रीमती र ससुरालीका परिवार डराए । उनीहरु तत्काल युवकलाई लिएर प्रहरीमा गए । पुलिसले ती युवकलाई तत्काल अस्पताल लिएर गयो । अहिले युवकको स्वास्थ्य खतरामुक्त भएको बताइएको छ ।
कोरबा जिल्लाको औराइ गाउँमा मुकुन्द नामका ती युवकको बिहे बासिनखारकी ज्योतिसँग भएको थियो । केही दिअघि उनीहरुबीच झगडा भएको थियो । मुकुन्दलाई आफ्नी श्रीमतीको अरु कसैसँग सम्बनध भएको शंका भएको थियो । यो कुराले रिसाएकी पत्नी माइती गइन् । पछि मुकुन्दलाई आफ्नो गल्ती महसुस भयो । श्रीमतीलाई फकाएर घर ल्याउन मुकुन्द कैयौं पटक ससुराली गए तर श्रमितीले घर फर्किन अस्वीकार गरिन् । श्रीमतीले मुकुन्दले आफूलाई माया नगर्ने बताइन् । श्रीमतीको यो कुराले मुकुन्दलाई नराम्रो लाग्यो । मायाको प्रमाण दिनको लागि उनले आफ्नो औंला काटे । यति मात्र होइन मुकुन्दले शरीरका अन्य ठाउँमा पनि काटेर पत्नीको नाम लेखेका छन् ।